Ukufihla Ukuzikhipha Kuwo Akusilo Isu Lokugcina | Martech Zone
NgeSonto, Agasti 26, 2012 NgeSonto, Agasti 26, 2012 Douglas Karr
Sihlola izinsizakalo eziningi ukuze sikwazi ukubhala ngazo kubhulogi noma sizisebenzisele amaklayenti ethu. Inqubo eyodwa esiqala ukuyibona ngokwengeziwe ngamasevisi akuvumela ukuthi uqale i-akhawunti kalula, kepha ayinazo izindlela zokuyikhansela. Angicabangi ukuthi lokhu kungukuqapha… futhi kungiphendulela ngokushesha enkampanini.
Ngichithe cishe imizuzu eyi-15 namhlanje ekuseni ngikwenza lokho. Isevisi yokuqapha imithombo yezokuxhumana inikeze i- isivivinyo samahhala ngakho ngibhalisile. Ngemuva kwamasonto angaba ngu-2, ngaqala ukuthola ama-imeyili angixwayisa ukuthi icala lami selizophela. Ngemuva kwezinsuku ezingama-30, ngaqala ukuthola ama-imeyili ansuku zonke ayengitshela ukuthi isikhathi sami siphelile futhi nginesixhumanisi sokuthi ngingathuthukisela kwi-akhawunti ekhokhelwayo.
Ama-imeyili isixhumanisi sokukhipha ohlwini ungilethe ekhasini lokungena ngemvume le-akhawunti. I-Grrr… ukungena ngemvume ukuze uzikhiphe ohlwini kungenye yezilwane ezifuywayo. Njengoba bengingena ngemvume noma kunjalo, ngicabange ukuthi ngizoyikhansela i-akhawunti. Ngiye ekhasini lezinketho ze-akhawunti futhi okuwukuphela kwezinketho bekuyizinketho ezahlukahlukene zokuthuthukisa - ayikho inketho yokukhansela. Ngisho nokuphrinta okuhle.
Vele, zazingekho izindlela zokucela ukwesekwa. Imibuzo evame ukubuzwa. Ukubuyekezwa okusheshayo kwama-FAQ futhi kungekho lwazi lokukhansela i-akhawunti. Ngokujabulisayo, ukuseshwa kwangaphakathi kwama-FAQ kwanikeza isisombululo. Isixhumanisi sokukhansela esingcwatshwe kuthebhu engaziwa ngaphakathi kwephrofayili yomsebenzisi.
Lokhu kungikhumbuza imboni yamaphephandaba… lapho ungabhalisa khona kakhulu ku-inthanethi, kepha kufanele ushaye ucingo ulinde ukubamba ukuze ukhulume nommeleli wamakhasimende ukukhansela okubhalisile. Futhi… esikhundleni sokuyikhansela, bazama ukukunikeza ezinye izinketho zokubhalisa nezipho. Bengilokhu ngithinta ucingo nalaba bantu lapho bengicasuke khona ngavele ngaphinda “ukukhansela i-akhawunti yami” kaninginingi baze bavuma.
Bantu, uma lokhu kungokwenu isu lokugcina, unomsebenzi othile okufanele uwenze. Futhi, ufihla izinkinga ngomkhiqizo noma ngensizakalo yakho ngokufihla ukugcinwa kwamakhasimende akho kweqiniso. Iyeke! Ukukhansela umkhiqizo noma insizakalo kufanele kube lula njengokubhalisela eyodwa.
Aug 27, 2012 ngo-7: 26 PM
Kungikhathaza kakhulu lapho ngibona lokho. Lapho sengithole i-imeyili enesixhumanisi esingalungile sokuzikhipha ohlwini ngiyimaka njengogaxekile futhi uma lokho kungasizi, ngakha umthetho wokuvele uwasuse khona lapho.